Isixhobo se-SPL soShishino lweoyile, iRhasi kunye neMigodi
Owona mthombo wamandla ubaluleke kakhulu okhoyo namhlanje yioyile kunye negesi yendalo. Ibalulekile kubukho bomntu kunye nokuzixhasa namhlanje kubomi banamhlanje. Kananjalo njengeyona mithombo yamandla iphambili yamandla kwihlabathi liphela, babonelela ngezinto ezingafunekiyo kumawakawaka eemveliso zemihla ngemihla-ukusuka kwizixhobo zombane nakwimpahla yokunxiba ukuya kumayeza nakwizinto zokucoca izindlu.
Amanzi kunye naMandla ngoyena mqhubi uphambili kushishino lweoyile kunye negesi, ngaphandle kwayo kungenakwenzeka ukukhupha, ukuvelisa kunye nokusabalalisa ioyile kunye negesi ukuphelisa abathengi. Yiyo loo nto iphantsi kwemithetho engqongqo ekhulayo ejolise ekuphuculeni umkhondo wokusingqongileyo ngexesha lokukhupha, ukuvelisa kunye nokuhambisa. Kananjalo amazwe amaninzi kwihlabathi liphela azise umthetho wokuphelisa ukukhutshwa kunye nokungcoliswa ngumoya, ngelixa iindawo zokucoca zilwakha amandla okuhlangabezana neemfuno zepetroli ephantsi yesalfure.
Ukusuka kwiziko lokucoca ulwandle kunye nonxweme - ukusulungekisa, ukuqhubekeka, ukuhambisa kunye nokugcina, iiMveliso ze-SPL zinesisombululo esifanelekileyo sokuhambisa ubushushu kuyo yonke ikhonkco le-hydrocarbon. Iimveliso zethu kunye nolwazi lweengcali zinceda abathengi kumzi mveliso weoyile kunye negesi ukonga umbane, ukwandisa ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa ifuthe lokusingqongileyo.